पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद ? – जन बिहानी राष्ट्रिय मासिक
September 15, 2021 जन बिहानीLeaveaComment on पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद ?
पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद ? नेपालमा प्रखर बहसको विषय बनिरहेको छ किनकि दलाल पुँजीवादी सत्ता एवम् संसदीय व्यवस्था यहाँ सैद्धान्तिक दृष्टिले मात्र नभई व्यावहारिक रूपले नै सबैले बुझ्ने गरी असफल र सङ्कटग्रस्त भएका छन् । यस बहसबाट कोही मान्छे तटस्थ रहन चाहँदैनन् वा उनीहरू चाहेर पनि बीचमा बस्न सक्दैनन् । परिस्थिति नै यस्तो पेचिलो, घनीभूत र प्रत्यक्ष बनेको छ, पुँजीवादी, वैज्ञानिक समाजवादी, राजावादी, यथास्थितिवादी, परिवर्तनवादी, सुधारवादी, क्रान्तिकारी जुन पक्ष भए पनि यसबाट चुपचाप बचेर कोही पनि चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । बरु उनीहरू आफ्ना मत, सन्तुष्टि–असन्तुष्टि, सहमति–असहमति, आवेग, आक्रोश, सोचाइ र धारणाहरू पाइलैपिच्छे पोख्न र सुनाउन बाध्य छन् ।
यस्तो लाग्छ, नेपाल ऐतिहासिक सङ्क्रमणको डिलमा उभिएको छ, नेपालका राजनीतिक शक्ति, नेतृत्व र बुद्धिजीवीहरूले सङ्कट र निकासबारे अग्रगामी नेतृत्व दिने हो भने देशमा गुणात्मक परिवर्तनको ढोका खुल्ने प्रबल सम्भावना बनेको छ । आखिर यो सङ्कट किन र के कारणले पैदा भयो ? यसको निकास के हो ? वैज्ञानिक समाजवाद र जनमतसङ्ग्रहले कसरी निकासको नेतृत्व गर्न सक्छन् ? किन वैज्ञानिक समाजवादी विशेषताहरू उत्तम छन् ? र सम्भावना के छन् ? हामीले आज प्रस्ट पार्नैपर्ने विषय बनेका छन् ।
१) सङ्कटको प्रभाव
खास सङ्कटले राज्यका कुनै पनि क्षेत्रलाई छोड्दैन । साराका सारा अङ्ग र सम्बन्धहरूलाई आफ्नो लपेटामा लिन्छ । आज हामी देख्न सक्छौँ– सङ्कटको प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र मात्र होइन, आमनागरिकको जीवन, सत्ताका अङ्ग राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि परिरहेको छ । साङ्गठनिक रूपले सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस पार्टी, जनता समाजवादी, जनमोर्चालगायत सारा संसद्‌वादी पार्टीहरू दुई–तीन टुक्रामा विभाजित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यिनको तापले अन्य साना पार्टीहरू पनि यता र उता हल्लिरहेका छन् । अदालत, प्रहरी प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, उद्योगी–व्यवसायी सारा विभाजित बन्दै गएका छन् । बाहिर प्रकट नभए पनि नेपाली सेनाभित्र पनि यसको असर देखिन अनिवार्य छ ।
१) राजनीतिक क्षेत्र
संसदीय व्यवस्थामा पैदा भएको सङ्कटले राष्ट्रिय राजनीति पूरै गिजोलिएको छ । दलाल पुँजीवादी सत्ता र जनताबीचको सङ्घर्ष विस्फोटक बन्दै गएको छ । देशमा जनताले चाहेको शान्ति, स्थिरता, सुशासन, स्वाधीनता, समृद्धि भताभुङ्ग भएका छन् । सरकार, प्रशासन, पार्टी सबैमा असन्तोष, सङ्घर्ष, तानातान, विभाजन देखापरेको छ । कथित संविधान बनेपछि भएको चुनावमा पुँजीको भद्दा प्रयोग, खरिदबिक्री, गुन्डागर्दी, बुथ कब्जा, मतपत्र च्याताच्यातजस्ता चर्तिकला प्रदर्शित भए । लगभग दुई तिहाइ मतसहित गठन भएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार वर्ष दिन पुग्दानपुग्दै पद, कुर्सी, पैसा, गुट–उपगुटका स्वार्थका लागि तानातान, हानथाप, लडन्त–भिडन्त भएर असफल भयो । संसद्‌वादी पार्टी र नेताहरू सत्तामा टिक्न र सत्तामा पुग्नका लागि रातारात विदेश धाउने, अमेरिका, सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड, दिल्ली पुग्ने, विदेशी मालिकहरूलाई आमन्त्रित गर्ने, गुहार माग्ने, दलाली गर्ने र देशको स्रोतको समेत मोलतोल गर्नेजस्तो निकृष्ट कार्यमा लिप्त बने । विगतका कुनै पनि तानाशाही नोकरभन्दा घटिया प्रकारले चाकरी, गुलामी गर्ने नोकरहरू भेटाएपछि मालिकहरू पनि रातारात प्लेन चढेर आउने, होली वाइन पिलाउने, राती १२ बजे दस्तखत गराउनेसम्मका घटिया कार्यमा लागे । सरकारमा पुगेको पार्टीमा मात्र होइन, पद, कुर्सीको लडाइँका कारणले प्रतिपक्षी काङ्ग्रेस, जसपा, जनमोर्चा सारामा विवाद, टुटफुट पैदा भयो ।
यही समयमा न्यायपूर्ण राष्ट्रिय आन्दोलनमा तानाशाही दमन भयो । राष्ट्रघात, जनघातका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेकै कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । हजारौँ नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेर यातना दिने र जेलमा कोच्ने कार्य गरियो । दमनलाई सीमाविहीन बनाउँदै निहत्था नेता–कार्यकर्ता कमरेड कुमार पौडेल, नीरकुमार राई, राजु घिमिरे, धनरूप बटालाको निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो । अन्ततः संसदीय व्यवस्था आफ्नो चरित्रअनुरूप नै विकृतिको थुप्रोमा पतन भएको छ भने संसद्वादी पार्टी, नेता र व्यवस्थाप्रति नै जनताको मोह भङ्ग हुन पुगेको छ ।
२) आर्थिक अवस्था
राजनीतिक क्रान्तिको असफलताले सबैभन्दा ठूलो सङ्कट आर्थिक क्षेत्रमा पैदा भएको छ । देशको आर्थिक स्वामित्व दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा पुगेको छ । मुठीभर शासक वर्गको हातमा मुनाफा केन्द्रित हुन पुग्दा नवधनाढ्य वर्ग रातारात अर्बपति र खर्बपति बन्दै गएको छ भने नागरिकहरू गाँस, बास, रोजगारीको अधिकारबाट वञ्चित बन्दै गएका छन् । पाइलापाइलामा पाइपाई निचोर्न खप्पिस दलाल पुँजीपति वर्गको अनियन्त्रित एवम् असीमित शोषणका कारण नागरिकहरूको जीवन सङ्कटग्रस्त बन्दै गएको छ ।
जमिनदारको हातबाट जमिन जनताको स्वामित्वमा नगएर दलाल पुँजीपति वर्गको हातमा पुगेको छ । लाखौँ किसानहरूसँग बस्ने बास छैन तर मुठीभर अभिजात एवम् दलाल वर्गसँग हजारौँ रोपनी जमिन केन्द्रित भएको छ । विदेश पलायन युवाहरूको सङ्ख्या आधा करोडभन्दा माथि पुगेको छ । उनीहरूकै श्रमबाट आउने विप्रेषणलाई राज्यले आफ्नो आयको पहिलो स्रोत बनाइरहेको छ । विगतमा केन्द्रमा बढी चल्ने घूस र भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म वैध कार्यजस्तो बन्न पुगेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा खुलेआम भ्रष्टाचार चलिरहेको छ ।
आर्थिक लाभकै लागि विदेशी निगम एवम् एकाधिकारवादी पुँजीलाई दलालहरूले देशभित्र अनियन्त्रित प्रकारले प्रवेश गराइरहेका छन् । विदेशी मालिक र दलालहरू मिलेर संयुक्त रूपमा देशलाई शोषण गरिरहेका छन् । एनसेलकै उदाहरण लिऊँ, उसले मात्र लगभग एक खर्बबराबरको करछली गर्यो तर संसद्‌वादी पार्टीहरू र राज्य चुपचाप बस्ने गरेका छन् । स्थिति कतिसम्म लाजलाग्दो छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी प्रशासनका मुख्य मान्छे र अधिकृतहरू नै भ्रष्ट देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको जमिन नै बेचेर खाने फटाहाहरूको चकचकी छ । नेता भनाउँदाहरू तस्कर र भ्रष्टहरूका खेलौना बनेका छन् । विदेशी ऋण बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको छ भने गरिब र धनीको दूरी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यी सारा कारणले श्रमिक जनता र दलाल पुँजीवादी आर्थिक सम्बन्धका बीचमा तीव्र अन्तरविरोध पैदा भएको छ ।
३) सामाजिक, सांस्कृतिक, अवस्था
सङ्कटको नकारात्मक प्रभाव सामाजिक एवम् सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि चर्को रूपले परिरहेको छ । सामाजिक एवम् सांस्कृतिक सम्बन्ध, सद्भाव, मूल्यहरू भताभुङ्ग बन्दै गएका छन् । राज्यले नागरिकका मौलिक अधिकारहरू गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सूचना सुनिश्चित गर्न नसक्दा अनेकौँ विकृतिहरू उत्पन्न भइरहेका छन् । अन्धविश्वास, धार्मिक असहिष्णुता, बालबच्चा, महिलाको मानव तस्करी, शोषण, विभेद, ठगी, चोरी, डकैती, हिंसा, आत्महत्या, जुवातास, छाडा, अश्लीलता, यौनधन्दा र वेश्यावृत्ति वृद्धि हुँदै गएका छन् । समाजमा सांस्कृतिक अराजकता, फैलिएको छ । युवपिँढी ध्वस्त हुने गरी सहरदेखि गाउँसम्म लागूपदार्थ दुव्र्यसन असीमित प्रकारले बढेको छ । मुखले स्वाधीनताको गुड्डी हाँक्ने तत्वहरू विदेशीको दाम र नुन खाएर उनीहरूकै दलाली, चाकरीमा नाच्ने अत्यन्त निच प्रवृत्तिमा डुबिरहेका छन् ।
४) बौद्धिक अवस्था
सङ्कटको कुप्रभाव देशको सबैभन्दा सम्मानित मानिँदै आएको बौद्धिक क्षेत्रमा पनि परेको छ । लेखक, विश्लेषक, चिन्तकहरू जताकतै असन्तुष्ट, अकर्मण्य, आलोचनात्मक, आशङ्कित देखिन्छन् । धेरैजसो आजको अवस्थाबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् र अग्रगामी परिवर्तन चाहिरहेका छन् । केही असन्तुष्ट त छन् तर वैज्ञानिक निकासका लागि नै तयार हुन सकेका छैनन् । कैयौँ विश्लेषकहरूले त प्रतिगमनका पक्षमा समेत कलम चलाउन थालेका छन् । केहीले केवल पात्र, व्यक्ति र सरकारमा बहसलाई घुमाएर जनतालाई अग्रगामी निकासको मार्गबाट विमुख गर्न कोसिस गरिरहेका छन् । केहीका लेखहरूमा पूर्वाग्रह, आवेग, कुण्ठा र निराशा ओइरिएको छ । लेखन प्रवृत्ति हेर्दा कतै पैसा पाउनका लागि मात्र प्रायोजित प्रकारले लेखिएका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । हुनत सङ्कटले सीमा नाघ्न थालेपछि बौद्धिक क्षेत्रमा पनि अराजकता देखिने गर्छ । आज त्यस्तै एउटा बौद्धिक व्यापार र अराजकता मडारिने चुनौती देखिएको छ । यद्यपि बुद्धिजीवीहरूको प्रमुख प्रवृत्ति भने आजको सङ्कटलाई आमूल परिवर्तनमा बदल्नुपर्छ भन्ने नै देखिएको छ । यो खुसीको कुरा हो ।
२) सङ्कटको कारणलाई बुझ्ने दृष्टिकोणहरू
नेपालमा अर्थराजनीतिक सङ्कट पैदा भएको छ भन्नेमा सबै वर्ग, समुदाय, पार्टी र शक्तिहरू सहमत छन् तर यो के कारणले पैदा भएको हो भन्नेमा भने उनीहरूबीच एकदम विपरीत खालका मत र धारणाहरू देखापरिरहेका छन् । हुनत वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्ष चलिरहने समाजमा सङ्कटको कारण र निकासबारे चरम मतभिन्नता देखिनु स्वाभाविक मात्र होइन, अनिवार्य नै हुन्छ किनकि हरेक वर्ग, वर्गसत्ता र वर्गप्रतिनिधि राजनीतिक पार्टीले आफ्नो कारणले नभई विरोधी वर्ग एवम् प्रतिनिधि संस्थाका कारणले सङ्कट पैदा भएको ठान्छ । कम्तीमा आफू दोषबाट अलग बस्न चाहन्छ । परन्तु सङ्कटको नियम यस्तो छ– सङ्कटको कारण कुनै न कुनै वर्गसँग जोडिएको हुन्छ । त्यसबाट निकासमा पुग्दा एउटा वर्गले अनिवार्यतः पराजय भोग्नुपर्छ र आफ्नो इच्छाविपरीत विरोधी वर्गलाई ठाउँ छोडिदिनुपर्छ ।
जस्तो कि ०६४ सालसम्मको सङ्कटको केन्द्रमा सामन्ती वर्ग र सत्ता थियो । उसले जतिनै सङ्कटबाट बच्न कोसिस गरे पनि अन्ततः त्यो सम्भव भएन र आफ्नो पतनलाई मुटुमा ढुङ्गा राखेर पनि स्वीकार्नुपर्यो । आजको सङ्कटको दोष सबैले एकअर्कालाई लगाएका छन् तर यो सही होइन । यो सङ्कटको केन्द्रमा २००७ सालदेखि विवादमा रहेको र २०६४ सालपछि सत्ता हात पार्न सफल दलाल पुँजीपति वर्ग र उसको सत्ता छ । अनि ढिलोचाँडो यसले आफ्नो पतन र पराजयलाई आत्मसाथ गर्नै पर्नेछ । यसपछि कुनै गल्ती नगरेमा समाजको जिम्मा पाउने बर्ग सर्वहारा श्रमिक वर्ग नै हुनेछ । त्यसको जिम्मा वैज्ञानिक समाजवादले लिनेछ ।
यही नियमअनुसार यतिवेला सङ्कटको कारणलाई बुझ्ने तीनवटा दृष्टिकोण सार्वजनिक भएका छन् । यी दृष्टिकोण र धारणाहरू कोबाट कसरी व्यक्त भइरहेका छन् र तिनका सारतत्व के छन् ? हामीले बुझ्न र बुझाउन आवश्यक छ ।
१) कम्युनिस्ट दृष्टिकोण
२) पुँजीवादी–संसद्‌वादी दृष्टिकोण र
३) राजतन्त्रवादी दृष्टिकोण
१. (क) कम्युनिस्ट दृष्टिकोण
कम्युनिस्ट दृष्टिकोणले आजको सङ्कटलाई दलाल पुँजीवादी अर्थराजनीतिक सम्बन्धका कारणले पैदा भएको ठान्छ । अर्थात् नेपालको अर्थउत्पादन सम्बन्ध, दलाल पुँजीपति वर्ग र श्रमिक जनताका बीचमा बढ्दै गएको अन्तरविरोध, संसदीय राजनीतिक व्यवस्था र त्यससँग जनताको सङ्घर्ष, भूमण्डलीकृत पुँजीवादी सम्बन्ध, नेपालमा त्यसको प्रवेश, त्यसले जनतालाई लादिरहेको शोषण, उत्पीडन र जनताको स्वाधीनताको सङ्घर्ष, दलाल पुँजीवादी सांस्कृतिक प्रभाव र जनताको सङ्घर्षका कारणले पैदा भएको बुझ्दछ ।
जस्तो कि श्रमिक जनता आर्थिक रूपले न्यूनतम् जीवन निर्वाहको सुनिश्चितता, आत्मनिर्भरता, आर्थिक समृद्धि र सुखी जीवन चाहन्छन् तर दलाल पुँजीवादी सत्ताले मुठीभर पुँजीपति वर्ग, निगम पुँजीपति, एकाधिकार पुँजीपतिका साथै दलालहरूको स्वार्थ सिद्धिका लागि जनचाहनालाई बेवास्ता मात्र नगरी दमन गरिरहेको छ । बाहिर सुख र समृद्धिको राग अलाप्ने तर भित्र श्रमिक जनताको श्रम र उत्पादनलाई निचोरेर आफ्नो झोली भर्ने कार्य गरिरहेको छ । विदेशी कमिसन लिएको भरमा जथाभाबी देशको प्राकृतिक स्रोतहरू जिम्मा लगाइदिने, मालिकहरूको स्वार्थ पूर्ति गरिदिन पार्टी र सरकारलाई दुरुपयोग गरेर उनीहरूको अनुकूल कानुन बनाउने, जनतामाथि लुट मच्चाएर देशको धन विदेश पलायन गर्ने कुकर्म गरिरहेको छ । जनताको थाप्लोमा ऋण थपिँदै गएको छ । कृषि उत्पादन घट्दो छ । महँगीले जनतालाई उठ्न दिएको छैन । तस्करहरूको बिगबिगी छ । यसले स्वभावतः दलाल पुँजीवादी आर्थिक सम्बन्धसँग श्रमिक जनताको सङ्घर्ष बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिक रूपले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था र श्रमिक एवम् देशभक्त जनताबीचको अन्तरविरोध व्यक्त भएको छ । जो माथि उल्लेख गरिएको आर्थिक सङ्कटकै प्रतिबिम्बशिवाय केही होइन । जनता सत्ता जनउत्तरदायी, प्रगतिशील, जनवादी (लोकतान्त्रिक) होस् साथै जनअधिकार एवम् स्वाधीनताको रक्षक होस् भन्ने चाहन्छन् तर संसदीय व्यवस्था यसको विपरीत तानाशाही, निरङ्कुश, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको बाटोमा चलिरहेको छ ।
पुँजीवादी संसद् झुटका पुलिन्दा बर्साउने, नक्कली विवरण र कागजात पेस गर्ने, गफ उडाउने, एक–अर्कालाई छक्याउने, पछार्ने र भ्रष्टाचारलाई अनुमोदन गर्ने अखडामा बदलिएको छ । पक्ष, प्रतिपक्ष जता रहे पनि विदेशी मालिकको भक्तिभाव एवम् दलाली गर्ने, आफ्नो कुर्सी जोगाउने र भुँडी भर्नेतिर मात्र छन् ।
सांस्कृतिक क्षेत्रमा पैदा भएको विकृतीकरण, भ्रष्टीकरण, उपभोगवादी चरित्र र प्रगतिशील, देशभक्त एवम् श्रमिक जनताका बीचको अन्तरविरोध र सङ्घर्षका कारण पनि यो सङ्कट पैदा भएको छ । जनता सम्भव भएसम्म जनवादी, प्रगतिशील, वैज्ञानिक एवम् भौतिकवादी संस्कृति चाहन्छन् । कम्तीमा पनि आफ्नो देशको जनसंस्कृति एवम् राष्ट्रिय संस्कृतिको संवद्र्धन र विकास चाहन्छन् तर दलाल पुँजीवादले राष्ट्रिय एवम् जनसंस्कृति माथिसमेत बेवास्ता र अतिक्रमण गर्दै विदेशी उपभोगवादी, छाडा, अश्लील, स्वार्थी, ठग संस्कृतिलाई भित्र्याउने कार्य गरिरहेको छ । यी दुई विपरीत सांस्कृतिक प्रवृत्तिबीचको सङ्घर्ष पनि यो सङ्कटमा व्यक्त भइरहेको छ ।
समग्रमा भन्दा आजको नेपालको सङ्कटको सार भनेको दलाल पुँजीवादी सत्ता, दलाल पुँजीवादी अर्थसम्बन्ध, यसको नेतृत्व र विचारका विरुद्ध नेपाली प्रगतिशील, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी, कम्युनिस्ट शक्तिको अन्तविरोध, प्रतिरोध र सङ्घर्षका कारणले पैदा भएको सङ्कट हो ।
(महासचिव विप्लवको ‘पुँजीवाद कि वैज्ञानिक समाजवाद’ पुस्तिकाबाट ।)
पार्टी एकता विचार र राजनीतिको प्रश्न हो : महासचिव विप्लव
October 26, 2021 November 20, 2021 जन बिहानी
प्रचण्ड बाबुरामले क्रान्तिलाई रद्दीको टोकरीमा फाले, अब अर्को विद्रोहका लागि जुटौं
April 7, 2022 April 7, 2022 जन बिहानी
एमसीसी नवऔपनिबेशीकरणको कडी हो, यो युद्ध हो र हिंसा हो : विषम
September 23, 2021 जन बिहानी